We Fight We Win. -- " More than Media ": Alternative Parliament အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ ၊ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုတက်ေ၇ာက်နိုင်ပါသည်။
Alternative Parliament အကြောင်းဆွေးနွေးပွဲ ၊ စိတ်ဝင်စားသူမည်သူမဆိုတက်ေ၇ာက်နိုင်ပါသည်။
Alternative Parliament ဆိုတာဘာလဲ ။Alternative Parliament ဆိုတာနိင်ငံသားတွေနဲ့စုပေါင်းဖွဲ့ စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်
နိင်ငံသားများ အစည်းဝေး ကြီး (Citizens Assembly)တခု ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့က ဘာလုပ်မှာလဲ ?
သူတို့ ကအစိုးရအနေနဲ့ပေါ်လစီတွေကို
အဖြေရှာကြတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတယ်။ ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလေ့ကျင့်ကြတဲ့နေရာဖြစ်လာမယ်။
ဒါဟာ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားမှာလုိုအပ်နေတဲ့ အရာတခုဖြစ်တယ်။ ပါလီမန်ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုရဲ့ နိင်ငံရေးဆုံချက် ဖြစ် ပါ တယ်။
လူတိုင်းသမတ၊ လူတိုင်း ၀န်ကြီး ဖြစ်နိင်ပါတယ်။
ဒီနေရာကအရည်အသွေးရှိ တဲ့ နိင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါလီမန်အမတ်တွေကိုမွေးထုတ်ပေးနဲ့ နေရာဖြစ်လာမယ်။
ဒီအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ကိုမိုးသီးဇွန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုမိုးသီးဇွန် ဆိုတာအထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုတော့ဘူးထင်ပါတယ်။
သူဟာ ၈၈ မျိုးဆက်။
သူဟာဗကသခေါင်းဆောင် ။ သူဟာလူဘောင်သစ်ပါတီကိုတည်ထောင်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။
နှစ်ပေါင်း ၂၅ နစ်နီးပါး ပြည်ပမှာဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့သူတဦးဖြစ်ပါတယ်။
သူက Alternative Parliament အကြောင်းကိုဟောပြောမယ်။
သူကရန်ကုန်တက္ကသိုလ် (ရူပဗေဒအထူးပြုဘာသာရပ်) နဲ့ ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် ( နယူးယောက်မြို့ )၊ နိင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမဟာတန်းမှာလေ့လာဆည်းပူးခဲ့သူတဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
နေရာ - တော်ဝင်နှင်းဆီ
This is really deadly poison for the myanmar society. very sad indeed.
30 October 2013 at 22:50